Xildhibaanada aqalka sare oo doortay gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa Kowaad. – Radio Daljir
Xildhibaanada aqalka sare oo doortay gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa Kowaad.
Janaayo 22, 2017 3:31 b 0
Muqdisho, Jan 22 2017- Waxaa xarunta Aqalka sare lagu soo gabo gabeeyay Doorashada Gudoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamanaka Soomaaliya, waxaana doorashadan ku tartamayay labo Xildhibaan oo katirsan Aqalka sare.
Dhanka kalena doorashada Gudoomiye kuxigeenka koobaad ee Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan ayana lagu soo gaba gabeeyey xarunta kumeel gaarka ah ee barlamaanka aqalka sare.
Maxamed C Carte oo soo dhoweeyey gudoonka cusub ee xildhibaanada aqalka sare.